हिमाली स्वरहरु – बाल्टिमोर एशोसिएसन अफ नेप्लीज इन अमेरिका (बाना) को प्रेस – विज्ञप्ति
बाल्टिमोर एशोसिएसन अफ नेप्लीज इन अमेरिका (बाना) को प्रेस – विज्ञप्ति
बाल्टिमोर एशोसिएसन अफ नेप्लीज इन अमेरिका (बाना) ले विगत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि बृहत पिकनिक सम्पन्न गरेको छ.बाल्टिमोरको गन पाउडर पार्कमा भएको पिकनिकमा मेरील्यान्ड, भर्जिनिया,डी.सी.,न्युयोर्क लगायतका स्टेटका नेपालीहरुको सहभागीता रहेको थियो। पिकनिकमा
उपस्थित भएका नेपाली सहभागीहरुका बीचमा डोरी तान्ने, हाँडी फोर्ने र भलिबल खेलकुद प्रतियोगिता गरिएको थियो। पुरुषको भलिबल प्रतियोगितामा दुई समूहको सहभागीता थियो. तेस्तै हाँडी फोर्ने खेलमा महिला र पुरुष गरी बिस जनाको सहभागीता थियो.जसमा ३ जना विदेशी पाहुनाहरुको पनि सहभागी थियो. सो खेलले सहभागीहरुलाई खुबै मनोरञ्जन प्रदान गरेको सहभागीहरुको भनाई थियो. त्यसैगरी पिकनिकको अर्को आकर्षणका रुपमा डोरी तान्ने खेल पनि रहेको थियो। प्रतियोगिता महिला- महिला र पुरुष- पुरुषका बीचमा भयको थियो। जसमा१८ जना महिला र १६ जना पुरुषले भाग लिनु भएको थियो। सोही अबसरमा बालबालिकाहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले बालबालिकाको बीचमा विभिन्न रमाइलो खेल खेलाइयको थियो। खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा बिजेताहरुलाई पुरस्कार र प्रमाण पत्र बानाकी अध्यक्ष रविना थापाले प्रदान गर्नु भएको थियो। रमाइलो खेलकुद प्रतियोगिताको संचालन बानाका उपाध्यक्ष रामप्रकाश भण्डारी र सदस्य अपला उपाध्यायले गर्नुभएको थियो। पिकनिकको अवसर पारेर बानाले संचालन गरेको नयाँ बर्ष २०६७ को रमाइलो शुभकामना साँझमा सहयोग गर्ने कलाकार,संघसंस्था र ब्यक्तिहरुलाई बानाकी अध्यक्ष रविना थापाले प्रमाण पत्र बितरण गर्नु भयो।
पिकनिकको जमघटमा अमेरिकामा नेपालीहरुलाई परेका कानुनी समस्याको बारेमा समाधान दिने उद्देश्यले अमेरिकी इमीग्रेशन ल का बिषयमा छलफल चलाईएको थियो। छलफलमा अमेरिकी इमीग्रेशन ल का बिज्ञ तथा बरिस्ठ कानुनबिद विनोद रोकाले सहभागीहरुलाई अमेरिकाको इमीग्रेशन कानुनको बिषयमा जानकारी दिदै समस्याको समाधानका बारेमा बोल्नुभएको थियो. सोहि अबसरमा होटल व्यवसायमा आफ्नो करियर शुरु गर्न चाहना गर्नेहरुका लागी फाराम संकलन गर्नुका साथै आवश्यक जानकारी प्रदान गरीएको थियो. जसमा H.T.C.Alliance organization का MICHELLE PERRY ले सहजीकरण गर्नु भएको थियो।
उक्त पिकनिकलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.शंकर शर्माले शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्तो कार्यक्रमले मनोरञ्जन प्रदान गर्नुका साथै आपसी भाइचाराको संबन्ध प्रगाढ बनाउछ भन्नुभयो। कार्यक्रममा मेरील्यान्ड, पेन्सिलभेनिया राज्यका लागी महाबाणिज्यदूत प्रेमराजा महतको उपस्थिती थियो. कार्यक्रमको अध्यक्षता बानाकी अध्यक्ष रविना थापाले गर्नुभएको थियो भने संचालन सचिव सतिश चापागाई र सदस्य विनोद उप्रेतीले गर्नुभएको थियो। यसैगरी पिकनिकमा ग्लोब नेपाल डट कम, डी. सी. नेपाल डट कम, बिश्वपरिक्रमा पाक्षिक, हिमाली स्वरहरु र रेडियो दोभानका संचालकहरुको सहयोग र सहभागीता थियो.कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष मोहन थापा, पुर्व अध्यक्ष कृष घिमिरे, भाषा कक्षा संयोजक श्याम कार्की ,बानाका कानुनी सहयोगी सी.पी.ए. हरि शर्मा लगायत विभिन्न संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो. पिकनिकलाई भब्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने पासापुचका उपाध्यक्ष सुन्दर राजभण्डारी र महासचिव राजु जोशी, तनहुँ समाजका अध्यक्ष पर्ल रेग्मी, मानवअधिकारबादी संस्था हिरनका अध्यक्ष किरण पन्त, उपाध्यक्ष दीपक घिमिरे,सचिव शिव विस्ट, म्याग्दी समाजका अध्यक्ष पारसमणि श्रेष्ठ, सुमन मल्ल, कमल भण्डारी, अर्जुन शाही,गुरुङ समाजका कुलप्रसाद गुरुङ, हितमान गुरुङ, नाजाका अध्यक्ष नगेन्द्र पौडेल, ए.एन.एस.का अध्यक्ष खेम भट्टचन,धरान अमेरिका सोसाइटीका अध्यक्ष बिश्व थापा,नासोका अध्यक्ष धर्म बिश्वकर्मा, शर्मिला के. सी., ध्रुव वन्त, संस्थापक सदस्य गणेश मलेगो, माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरीका प्रेम श्रेष्ठर र लुम्बिनी रेस्टुरेन्टका नारायण थापालाई बाना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ।
रविना थापा अध्यक्ष
तथा बाना परिवार